China High Quality နဲ့ Led လမ်းမီးဈေးနှုန်း China Manufacturers & Suppliers & Factory
High Quality နဲ့ Led လမ်းမီးဈေးနှုန်း - တရုတ်ထံမှထုတ်လုပ်သူ, စက်ရုံ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း
( 24 များအတွက်စုစုပေါင်း High Quality နဲ့ Led လမ်းမီးဈေးနှုန်း ထုတ်ကုန်များ)
LED ရေအောက်အလင်းသည်အနီရောင်၊ အစိမ်းနှင့်အပြာအရောင်များဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသော LED အလင်းရင်းမြစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ပန်းခြံ၊ ပန်းခြံ၊ ပြပွဲ၊ ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးနှင့်အနုပညာဆိုင်ရာအလင်းရောင်များအတွက်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။ LED ရေအောက်မီးအိမ်, ရေအောက်မီးအိမ်တစ်မျိုးဖြစ်ပါသည်, ရိုးရှင်းရေအောက်မီးခွက်ကိုရည်ညွှန်းသည်,...
LED landscape lamp သည်အလင်းအရင်းအမြစ်အဖြစ် LED ကိုသုံးသည့်အလှဆင်မီးခွက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အဆင်တန်ဆာများနှင့်ထွန်းလင်းတောက်ပသောဂုဏ်သတ္တိများရှိပြီးရိုးရာအလင်းအရင်းအမြစ်များထက်စွမ်းအင်ပိုမိုထိရောက်သောကြောင့်သက်တမ်းပိုရှည်သည်။ LED landscape lamp lamping သည်လူကြိုက်များသော lightpostpostpost ၏ design concept...
LED Garden Lamp သည်အပြင်ဘက်အလင်းရောင်မီးအိမ်များနှင့်မီးအိမ်များဖြစ်သည်။ အလင်းအရင်းအမြစ်သည် LED semiconductor အမျိုးအစားအသစ်တစ်ခုကိုတောက်ပသောကိုယ်ထည်အဖြစ်အသုံးပြုခြင်းဖြစ်သည်။ အများအားဖြင့်ပြင်ပလမ်းမီးတိုင်များနှင့်မီးအိမ်များကို ၆ မီတာဟုရည်ညွှန်းသည်။ အလင်းဥယျာဉ်၊ မီးခွက်များနှင့်မီးအိမ်များ၊ အလင်းတိုင်၊ အနားကွပ်၊...
LED စမတ်လမ်း laight
စမတ်လမ်းအလင်း, အဆင့်မြင့်အကျိုးရှိစွာနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသောဓာတ်အားလိုင်းလေယာဉ်တင်သင်္ဘောဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာနှင့်ကြိုးမဲ့ GPRS / CDMA ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာကိုလျှောက်ထားခြင်းအားဖြင့်လမ်းပေါ်မီးခွက်၏ဝေးလံသီခေါင်ဗဟိုထိန်းချုပ်မှုနှင့်စီမံခန့်ခွဲသဘောပေါက်သောလမ်းမီးခှကျကိုရည်ညွှန်းသည်။...
တစ်ဦးကအမှတ်အလင်းအရင်းအမြစ်တစ်ခုစံပြအမှတ်အလင်းအရင်းအမြစ်ဖြစ်ပါတယ်။ ပွိုင့်အလင်းအရင်းအမြစ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများ၏လေ့လာမှုရိုးရှင်းနိုင်ရန်အတွက်တစ်ဦးစိတ္တဇရုပ်ပိုင်းသဘောတရားဖြစ်ပါတယ်။ ရုံချောမွေ့လေယာဉ်, အမှုန်နှင့်မျှမတို့လေကြောင်းခုခံကဲ့သို့အမှတ်အလင်းအရင်းအမြစ်အဖြစ်မှန်အတွက်မတည်ရှိပါဘူး။...
မြို့ရိုးကိုအဝတ်လျှော်ဆီမီးခွက်, နာမည်အကြံပြုသည်အတိုင်း, အလင်းရေကဲ့သို့မြို့ရိုးကိုလျှော်ကြကုန်အံ့, အဓိကအားဖြင့်အလှဆင်အလင်းရောင်တည်ဆောက်ခြင်းပြုပါရန်အသုံးပြုများနှင့်လည်း LED ကိုစွမ်းအင်ချွေတာ၏ဝိသေသလက္ခဏာများရှိပြီးသောကြောင့်, ကြီးမားတဲ့အဆောက်အဦး၏အောကျဖျောပွဖို့အသုံးပြု, တောက်ပမြင့်မားနေသည် ထိရောက်မှု,...
LED ကို Hight-ရွက်တိုင်မီးအိမ်စီးရီး
အရပ်ရှည်ရှည်လှံတံကိုဆီမီးခွက် conical ဆီမီးခွက်ဝင်ရိုးစွန်းနှင့်အရပ်ရှည်ရှည်ပါဝါလေ့ type ကိုဆီမီးခွက်ဘောင်ပုံစံများကိုပေါင်းစပ်ကြောင်းသစ်ကိုစတိုင်အလင်းရောင် device ကိုအောင်အထက်သံမဏိ၏ 15 မီတာမှထောက်ပြရန်ဖြစ်ပါသည်။ ဒါဟာဆီမီးခွက်ကိုင်ဆောင်သူ, ပြည်တွင်းရေးဆီမီးခွက်လျှပ်စစ်,...
strip နဲ့ LED ဥယျာဉ်မီးအိမ်
ထုတ်ကုန် polyester ပလပ်စတစ်အမှုန့် electrostatic ၏မျက်နှာပြင်, Anti-ခရမ်းလွန်ဓါတ်ရောင်ခြည်, သံမဏိ connectors မြင့်မားခွန်အားကိုအားကြီးသော Anti-ချေးနိုင်စွမ်းမရှိ, အာဏာကို drive ကို, optional ကိုအရောင်, မူပိုင်အလင်းလှံတံကိုပက်ဖြန်း။ ယင်း၏ဆီမီးခွက်ဝင်ရိုးစွန်း၏ဖြာထွက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအရောင်ပြောင်းလဲနိုင်သည်။...
နောက်ကျောသို့ပြန်သွားရန်အတွက် LED ဥယျာဉ်အလင်းရန်
နောက်ကျော - မှ - ပြန်ဝင်းဆီမီးခွက်နှစ်ချက် - တိုင်အမြင့်ဆုံး - အနိမ့်သောလက်ရုံးတော်ပုံသဏ္ဍာန်။ ထိုကဲ့သို့သောနယ်စပ်အဖြစ်အမှောင်, ပါးလွှာခန္ဓာကိုယ်တစ်ကုလားထိုင်၏နောက်ကျောကဲ့သို့ပုတိုက်လေယာဉ်များတွင်ဂုဏ်ယူစွာရပ်တည်ခြင်းနှင့်ထိုင်သည်နေဝင်ချိန်အတွက်ပင်ပန်းတနေ့နှင့်အတူ, nattering, အပူအပင်ကင်းပြီး, back...
အဆောက်အဦးအပြင် LED ပြောက်အလင်း
မော်ဒယ်နံပါတ်။: CX-LH -005
အစက်အပြောက်အလင်းအိမ်၏ရည်ရွယ်ချက်မှာတစ်ဦးလက်နှိပ်ဓာတ်မီးနှင့်တူ၏။ သူတို့ကအများအားဖြင့်အိမ်ပြင်အသုံးပြုကြသည်။ ဖောက်ကွဲပြားခြားနားသောဖြစ်တယ်, ဒါအသုံးပြုမှုလည်းကွဲပြားခြားနားသောကွောငျ့ကို projector ဆီမီးမိုးလုံလေလုံအသုံးပြုမှုလည်းရှိပါတယ်။ စီးပွားဖြစ်အလင်းရောင်အတွက်မီးထိုး၏အားသာချက်များကိုမီးမောင်းထိုးပြ, သူတို့အာကာသ,...
LED ပြောက်အလင်းပုံမှန်ဖြစ်ပြီးသေးငယ်တဲ့အစို့တစ်တန်းဆီမီးမြင့်တက်ပေါင်းစပ်လျှင်, အလင်းအံ့သြဖွယ်ဒီဇိုင်းကိုပြောင်းလဲနိုင်သည်, မိုးလုံလေလုံ illume လေထုတည်ဆောက်နိုင်, အဓိကဆီမီးခွက်, အဓိပ္ပါယ်စကေး illume မရှိပါဘူးသောခေတ်သစ်ကျောင်းကမရှိဘူး။ သေးငယ်တဲ့မီးထိုးလွတ်လပ်စွာ Angle ပြောင်းလဲနိုင်သည်သောကြောင့်,...
LED ကို Characteristic လမ်းဆီမီးထွန်း
ဒီခေတ်ထဲမှာ, စွမ်းအင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့်ထုတ်လွှတ်လျှော့ချရေးပြင်းပြင်းထန်ထန်နိုင်ငံတိုင်းတို့ကထောက်ခံကြသည်။ ပြင်ပအလင်းရောင်၏လယ်ပြင်တွင်, စွမ်းအင်ချွေတာအလင်းရောင်မီးခွက်၏သုတေသနနှင့်အသုံးပြုမှုကိုလည်းဆက်လက်နေကြသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီတွင်ဤလမ်းမီးခွက်ကိုလည်းစွမ်းအင်ချွေတာမီးခွက်အဖြစ် featured နေကြသည်။...
LED Powered အဆောက်အဦးအပြင် Pathway အလင်းများ
ဤရွေ့ကားမြင့်မားတဲ့ဖိအားဆိုဒီယမ်မီးခွက်ကျယ်ပြန့်လမ်းများ, အဝေးပြေးလမ်းမကြီး, လေဆိပ်, wharves, သင်္ဘောကျင်း, ဘူတာရုံ, ရင်ပြင်, လမ်းလမ်းဆုံ, စက်မှုနှင့်သတ္တုတူးဖော်ရေးလုပ်ငန်းများ, ပန်းခြံများ, ဝင်းအလင်းရောင်နှင့်စက်ရုံစိုက်ပျိုးမှုအတွက်အသုံးပြုကြသည်။ အမြင့် - အရောင်အမြင့်ဆုံး -...
လက်နက်အမြင့်ပါဝါနဲ့ LED လမ်းအလင်း
လမ်းမီးစီးရီး, လမ်းမီး, လမ်းမီး Decoration, လမ်းမီးစာအုပ် မြင့်မားသောပါဝါ Led လမ်းမီး, Led လမ်းမီး, Led လမ်းမီးမီးသီး, Led လမ်းမီးဈေးနှုန်း 1.There ကနေရှေးခယျြဖို့အရောင်များကိုအမျိုးမျိုးရှိပါတယ် 2.The ဆီမီးခွက်မြို့ပြအဓိကလမ်း, အစာရှောင်လမ်းကြောင်းများအတွက်အဓိကအားသင့်လျော်သည်။ မူပိုင်ခွင့်နည်းပညာများ,...
LED ကိုလမ်းအလင်း Fittings
LED လမ်းပေါ်ဆီမီးခွက် power supply system ကိုလည်းအစဉ်အလာအလင်းအရင်းအမြစ်မှကွဲပြားခြားနားသောဖြစ်ပါသည်, စဉ်ဆက်မပြတ်လက်ရှိ drive ကိုပါဝါသဘောပေါက်ခြင်းဖြင့် LED, ကြီးမားတဲ့အခြေခံအုတ်မြစ်မကြာခဏတစ်ဦးနဲ့ LED device ကို switch ကို power supply ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု၏ရိုးရှင်းအစီအစဉ်၏ပုံမှန်အလုပ်အာမခံဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ တင်းကျပ်စွာ...
High Quality waterproof နဲ့ LED လမ်းအလင်း
လမ်းပေါ်ဆီမီးခွက် LED ထားတဲ့ဆီမီးကွန်ဒတ်တာအလင်းရောင်ကအစိုင်အခဲအအေးအလင်းအရင်းအမြစ်တစ်ခုဖြစ်သည်, အစိမ်းညစ်ညမ်းမှု-အခမဲ့, ဒီထက်ပါဝါစားသုံးမှုမြင့်မား photosynthetic ထိရောက်မှု, ရှည်သောအသက်ထို့ကြောင့်အဆိုပါ LED ကိုလမ်းပေါ်ဆီမီးခွက်ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးချွေတာလမ်းအလင်းရောင်စွမ်းအင်ရဲ့အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်ပါတယ်။...
High Quality နဲ့ Led လမ်းမီးဈေးနှုန်း high-quality နဲ့ LED လမ်းမီးဈေးနှုန်း Led လမ်းမီးဈေးနှုန်း LED ကိုလမ်းမီးဈေးနှုန်း High Quality လမ်းမီးဝင်ရိုးစွန်း LED ကိုလမ်းမီးစီမံကိန်း High Quality ကို LED လမ်းမီး high-ပါဝါနဲ့ LED လမ်းမီးစီးရီး
High Quality နဲ့ Led လမ်းမီးဈေးနှုန်း high-quality နဲ့ LED လမ်းမီးဈေးနှုန်း Led လမ်းမီးဈေးနှုန်း LED ကိုလမ်းမီးဈေးနှုန်း High Quality လမ်းမီးဝင်ရိုးစွန်း